Baarkin La'aan | Martech Zone
Wednesday, May 2, 2007 Axad, Sebtembar 30, 2012 Douglas Karr
Ma jiraan wax la mid ah inaad shaqo tagto oo aado geerashka aad PAY bixiso oo aan baabuur dhigasho loo harin! Waxaa jiray shir maanta ka dhacay magaalada hoose sidaa darteed garaashku wuu qasanaa oo wuu iibiyey dhammaan goobihii. Markaa dhammaan macaamiisha BIXINTA caadiga ah waxay ahayd inay ama ku bixiyaan garaash kale ama ku cidhiidhyaan meel.
Waxaan doortay inaan hal-abuurnimo ku sameeyo shaqadayda baarkinka - Waxaan si toos ah u istaagay albaabka dabaqa 6-aad hortiisa! Haddii aan jiido waxaan runtii afuufayaa daboolka. Waxaan rabay inaan subaxnimadii hore galo si aan u sameeyo dib u eegis badeecad waxaana ku qaatay 30 daqiiqo isku dayga inaan dhigto! Shaqaalahayga iyo saaxiibkay Emily waxay moodayeen inay tahay wax aad u qosol badan oo ay ku qaadatay tallaal taleefankeeda kamaradeed:
Waa adeeg aad u xun oo macaamil ah in lagu jahawareero macaamiishaada lacagta bixinaysa halkii hal-saacad!
Cusbooneysiin: Lama jiidan, laakiin qof ayaa warqad wanaagsan iigu reebtay muraayadda hore oo ah inaan ka soo baxay chuck,KANI MA AHAN DHIBAATOOYIN GAAR AH, Caqli!"
MacBookPro oo ku jira Talaajo
Isku socodka gawaarida ayaa ahaa mid cabsi badan saaka. Waxaan kudhamaaday inaan ka boodo gaariga xoogaa dhismayaal ah oo shaqada ka mid ah si xaaskeyga ay u sameyso kulan subax hore ah. Garaashkeyga gawaarida la dhigto wuxuu jecel yahay inuu iska iibiyo wixii shir ah ee magaalada ka dhacaya. Adiga oo kale, waligey maan fahmin sababta garaashyada baarkinka ay ugu dhega nuglaadaan macaamiishooda joogtada ah in kabadan 1-mar-macaamiishooda.
Sababta ay u sameeyaan waa mid fudud. Sida xiriirada xadgudubka badankood macaamiisha joogtada ahi way ku soo noqdaan.
Waxyaabaha sidan oo kale nasiib darro marwalba way dhacaan, makhaayadaha qaarkood waxay mudnaan siinayaan geynta / qaadista iyo macaamiishooda guryaha (mar baan kani ku sugay 2 saac tan darteed).
Macaamiil ahaan waxa kaliya ee aan sameyn karno waa inaan cagaha ku codeyno, aadna uga hadalno. Gawaarida jilicsan ayaa hela dufanka.
Waxyaabaha murugada leh ee ku saabsan xaalada garaashka gawaarida la dhigto ayaa ah inay badanaa yihiin xulashada ugu fiican (qiimaha ama goobta) sidaa darteed waxay kugu haystaan ​​foosto.